Fashil ku yimid heshiiska daabacada shilin Soomaaliga ee Waqooyiga Suudan iyo Soomaaliya wada gaareen – idalenews.com
Dowlada dalka Suudaanta Waqooyi ayaa si rasmi ah u sheegtey in ay joogisey daabacaad lacago shilin Soomaali ah oo ay in muddo ah ku howlaneed, taas oo si wadajir u gaareen labada dal ee Somalia iyo Waqooyiga Suudaan. Heshiiskaasi ayaa dhanka Soomaaliya uu u saxiixey kana qeyb ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xiligaas ahaa Wasiirka Maaliyada Somalia isla markaasna ahaa Ra’iisul Wasaare ku xigeen Xukuumadii Cumar Abdirashiid Cali Sharmaake.
Dhawaqaan ka soo yeerey dowladda Waqooyiga Suudan ayaa waxaa saxaafada u sheegey Qunsulka Soomaalida ee Dalka Suudaan Ibraahim Guure Maxamed oo sheegay in gebi ahaanba uu fashilmay heshiiskaas, isla markaana aysan jirin xiligan wax Lacago ah oo ay samaynayso.
Mr Guure ayaa hoosta ka xarriiqay in heshiis seddax sano ka hor ay labada wadan kala saxiixdeen uu dhigayay in Xukuumadda waqooyiga Suudaan ay samayso lacago shilin soomaali ah ka kooban 5000 (shan kun), 20000 (Labaatan kun) iyo lacago kaleba taasoo heshiisku qoraayay in Waqooyiga Suudaan ay dalka Soomaaliya u soo daabacdo lacagahaas Shilin Soomaaliga ah oo lagu bedelaayo 1000 shilin ee hadda dalka ka jira.
Ma cada sababaha waqtiga xaadirka keeney inuu fashilmo heshiiskii ay 2da dal gaareen muddo laga joogo seddex sano, Si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa jooginta dabacaada lacagtaas cusub soo dhaweeyey, waxayna horey welwel uga muujiyeen culeyska iyo cicir bararka ay la imaan karto lacagtaas. Waxaa sidoo kale jirey khilaaf dowlada dhexdeeda ah oo arrintaan ku saabsan, iyadoo masuuliyiinta ka tirsan dowlada ay ku eedeeyeen in Shariif Xasan iyo madaxweyne Shariif oo xiligaas saaxiibo aad isugu dhow ahaa ay ka dambeeyeen in la soo daabaco lacagahaan. Barlamaanka Soomaaliyeedna loo diidey in uu ka doodo ama go’aan uga gaaro daabacaada lacag cusub oo uu dalku yeehso.
Muuqaalka Magaalada Marka ee Gobalka Shabeelada Hoose